Otu esi ejikwa igwe ojii na Chef Automate na AWS
Na-eduzi igwe ojii na Chef Automate na AWS
Chef na AWS: Otu nzukọ dị mkpa
Chef Automate dị ka uru oversaw
Mụbaa na mkpakọrịta gị na AWS
Ike nke onye na-azụ ahịa na ndị isi na-emeghe
AWS OpsWorks maka Chef Automate bụ ọrụ nkwonkwo na-aga n'etiti ahịa Amazon na Boss software, Inc. Nke ahụ pụtara, òtù abụọ ahụ na-elekwasị anya n'ọganihu gị na nlekọta a. Anyị na-enwe obi ụtọ na accomplices ma anyị na-arụsi ọrụ ike iji gosi gị ihe kacha mma nke ọ bụla n'ime oge anyị na-eweta na tebụl. Na-arụkọ ọrụ ọnụ ọnụ ma na ị nwere ike ịdabere na ịchọta onyinye a nọgidere na-eto eto n'ihi ịkatọ ndị nkatọ. Ndị ọsụ ụzọ abụọ na-azụ ahịa gbakọtara aka iji hụ na ị dị njikere (dị ka anyị kwuru site na mmalite) "jikwa igwe ojii ahụ."
At isi, anyị na-ahụ ụkpụrụ na ndị ahịa anyị kachasị. Ebe ọ bụ na anyị agbanweela mkpakọrịta ha site n'inyere ha aka ịmepụta koodu ọsọsọ, nchebe karị, ma bụrụ ndị dabara adaba, Chef Automate na-eme ka ọ bụrụ ọrụ nlekọta. Dị ka ọrụ ọ bụla nke nchịkwa isi, na-ekwenye na ọ nwere ike ịnweta na ozi ikwesị ntụkwasị obi chọrọ oké ume, ike, na akụ. Ndị ahịa 500 anyị bara ụba kwesịrị iri nri-ntọala bụ isi na nchịkọta nchịkọta nke nchịkọta dịka ndị ọchịchị.
OpsWorks AWS maka Chef Automate na-enye ọkwa dị otú ahụ dị irè, nchebe, na àgwà na-adịghị agbanwe agbanwe maka Chef Automate na ị na-atụ anya na ọ bụla uru AWS. Dịka nkwekọ nke abụọ ịkọwa àgwà na-adịghị agbanwe agbanwe nke akụrụngwa gị ma ọ bụ usoro nke usoro gị, ị nwere ike inye AWS ohere ilekọta Chef Automate n'ihi na gi na 24X7X365 bu uba na ịkwụ ụgwọ-dị ka ị na-aga. Kwee ka AWS na-emeso ike gị, nlọghachite, na mmepụta ihe omume. Nke ahụ na - enye gị na ndị otu gị ohere itinye ego na - enweghị ike na - elekọta Chef Automate na oge ọzọ itinye uche na ịkụ ndị na - agba gị ọsọ.
AWS OpsỌrụ maka Chef Automate bụ abamuru AWS. Dịka nlekọta ọ bụla ị zụrụ si AWS, ha bụ onye ahịa nke ndekọ. AWS na-enye nkwado, na-emekọ ihe banyere nlekọta gị, ọ bụkwa nzube gị ịkpọtụrụ maka akụkụ ka ukwuu nke nchegbu gị. Chef Software Inc. bụ onye na-arụ ọrụ AWS ma na-eme ka ha jiri ihe anyị na-eme ihe. Na AWS OpsWorks maka Chef Automate, ị na-agbasawanye na mmekọrịta dị ugbu a dịka ị nwere ugbu a na Amazon Web Services. Ojiji nke ochichi a gosipụtara dịka nkọwa zuru ezu na ụgwọ AWS gị. Ị ga-enweta ike niile nke Onye Ọchịchị, nke ndị igwe na-ahụ maka ígwé ojii kwadoro ị maara ma tụkwasị obi. A na-etinye akụkụ ka ukwuu nke nchịkwa Chef gị n'ime otu ihe ziri ezi, dị mfe iji jiri ya, ma dị mfe ịhụ ebe. Dị ka ụfọdụ akụkụ nke isi nke nchịkọta ngwa gị, ọ bụ otu nke nkwekọrịta siri ike nke AWS nyere gị.
Onyinye ọhụrụ a bụ ụzọ dị mfe maka ndị ahịa AWS iji nwalee ahịa achụmnta ego nke Chef: Chef Automate. Iji ruo 10 free hubs maka otu afọ, ọ bụ ụzọ kachasị mma maka ịmalite ngwa ngwa ma chọpụta otú Chef automat na-enye gị perceivability, nsonye, ​​na usoro ọrụ mgbe ị na-eme ihe niile gbanwere na gị ngwa ngwa. Site na AWS OpsWorks maka Chef Automate, ị dị njikere iji ọtụtụ n'ime ihe ndị na-emeghe na-enweta mgbe niile na usoro nchịkwa nke Ndị Nlekọta gụnyere cookbook, test-kitchen, InSpec, Habitat, na (n'ụzọ doro anya) Onye isi na-elekọta gị AWS usoro na ngwa. Ị na-enweta ohere ịmepụta akụkụ kachasị mma nke ụwa abụọ ma malite na ọnyà nke ijide azụ.
Ọ dịghị mgbe ọ dị ọsọ ma ọ bụ obere na-achọ ịmalite na Chef akpaaka; enwere ike ịnweta ugbu a n'otu nkasi obi AWS dị ka usoro nchịkwa ndị ọzọ.
12 Aghụghọ iji Jikwaa Ọrụ Igwe ojii
Usoro Nkuzi 9 kacha mma na Google Cloud Platform